नाच्दानाच्दै गायक हुँदै निर्देशक बनेका सविन कार्की (भिडिओ) :: सुसन चौधरी :: Setopati
भन्छन्- संगीत भएसम्म सांगीतिक क्षेत्रमा जे पनि गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ
मन्दिरा घिमिरे काठमाडौं, फागुन २२
नेपाली गीतसंगीतमा रूची हुने युवा पुस्ताले सुनेको नाम हो- सविन कार्की। कतिले उनलाई बीस्ट भनेर चिन्छन्। उनले आफ्नो नामै सविन कार्की ‘बीस्ट’ राखेका छन्।
युट्युबमा त्यही नाममा उनको च्यानल छ। जसमा साढे ६ लाख बढी सब्सक्राइबर छन्।
केही वर्षअघिसम्म सविन डान्सर मात्र थिए, गीतका म्युजिक भिडिओमा नाच्थे। कार्टुन क्रुजमा आवद्ध थिए। त्यतिबेला ‘फन्टास्टिक’,‘ भाइरल भैइदियो…’ जस्ता गीतमा उनी नाचेको धेरैले मन पराएका थिए। युट्युबमा ती भिडिओहरू लाखौंले हेरेका छन्।
नाच्दानाच्दै सविन कोरियोग्राफर बने, अभिनय गर्न थाले। अहिले उनी आफैं गीत लेख्छन्, गाउँछन्, कमेडी गर्छन्, म्युजिक भिडिओ बनाउँछन्। ती भिडिओ आफैं निर्देशन पनि गर्छन्।
२७ वर्ष पुगेका सविनलाई अहिले संगीतका हरेक विधामा आफूले काम गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ।
‘मलाई जुनसुकै काममा आफ्नो सय प्रतिशत दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। आफूले काम गरेको क्षेत्रमा केही योगदान पुर्‍याउन चाहन्छु', उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘यहाँ दुई किसिमका कलाकार छन्: एक टिक्ने, बिक्ने र बस्ने अनि अर्को यो क्षेत्रलाई नै अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्ने। मलाई यो क्षेत्रमा केही योगदान पुर्‍याएर अघि बढ्न मन छ।'
गुल्मीमा जन्मेका सविनलाई नाचगानमा सानैदेखि रूची थियो। उनको घरको माहौल पनि सांगितिक थियो।
‘मेरो आमा नेपाली कलाकार संघमा हुनुहुन्थ्यो,’ सविनले भने, ‘आमालाई फिल्मको प्रिमियरको टिकट आउँथ्यो। म पनि जान्थें। त्यहीबेला हरिवंश आचार्यजस्ता धेरै कलाकारलाई नजिकैबाट देख्न पाएको थिएँ। सायद त्यहीँबाट प्रेरित भएँ होला।’
उनले पहिलो पटक कक्षा आठमा पढ्दा नाचेका थिए। विद्यालयबाट देउसी भैलो खेल्न जाँदा उनी नाचेको सबैले मन पराए। सबैले ‘गज्जब राम्रो नाच्यौ’ भनेपछि आफूलाई पनि नाच्न सक्छु जस्तो लागेको उनी बताउँछन्।
उनका साथीहरू सबैले आफ्नो स्टेज नाम राखेका थिए। लहलहैमा सविनले पनि नामको पछाडि बीस्ट थपे। जसका उनले दुई अर्थ लगएका छन्, एउटा सबैभन्दा राम्रो र अर्को सैतान।
बाल्यकालमा उनी बदमास थिए रे!
'कक्षामा अरूलाई दुःख दिने, एक-दुई जना हुन्छन् नि! म त्यसैमा पर्थें। त्यसो गर्न नहुने रहेछ भन्ने अहिले आएर बुझें,’ सविनले भने,‘कक्षामा जोक सुनाउँथें। साथीहरू गलल हाँस्थे। सबैले हौसला दिएपछि आत्मविश्वास बढ्दै गयो।’
त्यतिबेला नाचेर र कमेडी गरेरै जिन्दगी चल्छ भन्नेचाहिँ कसैलाई लाग्दैनथ्यो। आफूलाई कतिले नाचेर के हुन्छ भन्दै जिस्काएको सविन अहिले पनि सम्झन्छन्।
‘अहिलेजस्तो डान्सर र कमेडियनलाई हेर्ने र दिने सम्मान त्यतिबेला कहाँ थियो र!,’ उनले भने।
अरूले जिस्काए पनि सविनले हिम्मत हारेनन्, नाच्न छोडेनन्। उनी कार्टुन क्रुजमा आवद्ध भए। झन्डै एक दशक कार्टुन क्रुजमा काम गरेपछि उनी अलग्गिए।
उनको मनमा केही नयाँ गर्ने हुटहुटी थियो, जुन नाचेर पूरा भइरहेको थिएन। त्यसपछि उनले कोरियोग्राफीमा हात हाले।
‘मैले नाचेर डान्समा केही योगदान पुर्‍याउन सकें। त्यसले गर्दा कतिलाई सहज पनि भयो,’ सविनले भने, ‘म भारत बस्दा झन्डै छ वर्ष अगाडि नै अब केही नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो। त्यही समय भाइलाई प्रोडक्सनमा लाग्न सामग्री किनेर पठाएको थिएँ।’
करिब ७ वर्षअघि उनलाई अब म गाउँछु भन्ने सोच आएको थियो। त्यही कारण उनले संगीत सिके, अभ्यास गरे। पछि उनले ‘तोरी र्‍याप’ निकाले। जसलाई दर्शक/स्रोताले मन पराए।
हालसालै उनको नयाँ गीत ‘सबै ठीक छ…’ सार्वजनिक भएको छ। यो उनको पाँचौं गीत हो। तोरी र्‍यापपछि उनले ‘सपनाहरू फेर्दै’, ‘ओ ए’ र ‘दुःख पोयेट्री’ गीत निकालेका छन्।
संगीतका हरेक विधामा दर्शक/स्रोताले आफ्नो कलालाई मन पराइदिएका यो क्षेत्रमा सबैथोक गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास सविनलाई छ।
‘सुरूमा डान्स गर्ने आत्मविश्वास थिएन, पछि त्यसैमा पोख्त भएँ। आहिले सांगीतिक क्षेत्रमा सिक्ने चरणमै छु,’ उनले भने,‘कुनै दिन संगीतमा पनि अब्बल बन्न निरन्तर कोसिस गरिरहेको छु।’
उनमा संगीत भएसम्म संगीतमा गर्न मिल्ने सबै काम आफूले गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ।
आहिले बीस्ट प्रोडक्सनमा उनका भाइ सञ्जय कार्की र उनले काम गरिरहेका छन्।
सबै काम आफैंले गरिरहेकाले अहिले नयाँ खुराक दर्शकमाझ पुर्‍याउन अलि ढिला हुने गरेको उनी बताउँछन्। आउने दिनमा लेखनमा मात्र केन्द्रित हुने सविनको योजना छ।
यस क्षेत्रमा जोसका साथै होस पनि सँगै लिएर आउनु पर्ने उनको सुझाव छ।
‘जोस पनि केही समयका लागि मात्र हुनु हुँदैन। त्यो जोस कायम राखेर काम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ,’ सविनले भने,‘अहिले व्यापारिक दृष्टिकोणमा आफूले कसरी बजारमा चलायमान बनाउने भन्ने सिक्न सके झन् सहज हुन्छ।’
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २२, २०७८, ०६:३८:००